AKHRISO:Misaaniyada Ay Ku Sharyn Doonto Dowlada Somaliya Sanadka 2019
December 31, 2018 M.Jo 0
Golaha Shacabka ayaa shalay ansixiyay Miisaaniyadda Dowladdu ku shaqeyn doonto sannad 2019-ka oo berri ka bilaabanaya, kuna dhammaan doona 31 December.Sanadka 2019. Miisaaniyadda sanadka 2019 ayaa ahaa tii ugu qarashka badneyd ee dowladda isticmaali doono muddo shan sano kaddib, laga soo bilaabo sanadkii 2013, xilligaasoo aheyd markii u horeysay ee uu dalka Miisaaniyad yeesho. 7-dii sano ee u dambeeyay ayay Miisaaniyadda dalka kor u sii kaceysay, waxaana sare ay u kacday 305%, sida ay soo shaxda Hey’adda Wakiil oo ka faaloota arrimaha dowlad wanaaga iyo Dimoqraadiyadda ee Soomaaliya. Haddaba waxaa halkan idin ku soo bandhigeynaa Miisaaniyadda sanadka 2019 iyo sida loo qorsheeyay:- Miisaaniyadda 2019-Ka Wadarta guud ee miisaaniyadda sannadka 2019-ka waa $340,060,149. Waxay dhowr milyan dheer tahay miisaaniyadda sanadkii hore oo gaaraysay 274.6 Milyan oo doolar. Waxay miisaaniyadan ku dhisan tahay laba dakhli oo kala ah midka gudaha ee ah canshuuraha kala duwan ee ay dowladdu qaaddo iyo dakhliga ka yimaada deeqaha la siiyo dowladda. Dakhliga gudaha ayaa la filayaa inuu noqdo 55.8%, guud ahaan wadarta miisaaniyadda, halka deeqaha la filaayo ay miisaaniyadda ka noqon [Sii aqri]
Mid Ka Mid ah Wariyayaasha Muqdisho Oo Loo Magacaabay Guddomiyaha Degmada C/Casiis Muq
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Eng C/raxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa si lama filaan ah u magacaabay Ismaaciil Mukhtaar Cumar Oranjo oo ahaa weriye caan ah oo ka tirsanaa Shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta. Wareegto ka soo baxday Xafiiska Guddoomiye Yariisow ayaa waxaa sidoo kale xilka looga qaaday Sharma’arke Ladane oo ahaa Guddoomiyihii degmadaas. Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa dhowr jeer isbedelo ku sameeyey degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana uu magacaabay illaa afar degmo. Shalay ayay aheyd markii uu magacaabay Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid, iyadoo guddoomiyihii xilkaas hayay Axmed Xasan Geedow uu shaqo joojin ku sameeyay kuxigeenkiisa. Magacaabida xilalka degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa horay waxaa u sameyn jiray Wasiirka Arrimaha Gudaha, kaddib marka uu soo jeediyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, hase ahaatee shanta degmo ee illaa hada la magacaabay ayaa ku soo baxay wareegto uu ku saxiixnaa Guddoomiye Yariisow.
faah faahino kasoo baxaya iyo Dilal goordhaw ka dhacay Muqdisho
War goordhaw ka imaanaya Muqdisho ayaa sheegaya in kooxo biskoolado ku hubeesan goordhaw xaafado katirsan degmada Waabari ka geesteen dilal kala duwan. Sida aan Wararka sheegayaan kooxo biskoolado ku hubeesan ayaa ruux aan wali la ogeyn waxa uu yahay waxa ay ku dileen xaafada Unicef ee katirsan degmada Waabari, waxaana baxsaday ragii dilkaasi geestay. Kooxo hubeesan ayaa sidoo kale daqiiqado kahor isla degmada Waabari gaar ahaan meel ku dhaw xarunta degmada Waabari waxa ay ku dileen nin la sheegay in uu katirsanaa ciidanka dowlada. Askariga ayaa xiliga la dilayay hor fadhiyay goob Farmashiye ah sida goob joogayaal ku warameen, dhalinyaro biskoolado ku hubeesan ayaana goobtaasi ku dilay askariga iyagoona dilka kadib goobta uga baxsadeen si deg deg ah. Ciidamo katirsan booiiska Soomaaliya ayaa gaaray xaafadaha dilalka ka dhaceen, waxa ayna ciidamada booliiska wadaan baaritaano adag ay ku raadinayaan raga hubeesan ee saakay dilalka ka geestay degmada Waabari. Dilalkan goordhaw ka dhacay degmada Waabari ayaa imaanaya xili saakay isla degmada Waabari gaar ahaan meel ku dhaw Saldhiga booliiska lagu dilay sargaal katirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliya.
Maxaa Ka Jiro in uu Muran u Dhaxeeyo Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka
Iyadoo shalay Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka uu ansixiyay Miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2019, ayaa waxaa soo baxaya muran u dhaxeeya Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare oo ka mid ahaa meel marinta Miisaaniyadda in Aqalka Sare qeyb ka noqdo. Aqalka Sare ayaa maanta kulan ku leh Xaruntooda, waxaana qorshahooda yahay inay meel mariyaan Miisaaniyadda 2019, inkastoo aanay weli u soo gudbin Golaha Shacabka, waxaana arrintaas ka dhashay muran Ilo ku dhow Aqalka Sare ayaa sheegaya in sanadkii hore Madaxweynaha kala hadleen Miisaaniyadda uu meel mariyo Aqalka Sare, iyagoo dacwad ka ahaa Golaha Shacabka inuu la garab maray Miisaaniyadda. Aqalka Sare ayaa ugu dambeyn ansixiya sharciyada uu soo meel mariyo Golaha Shacabka, waxaana uu horay u meel mariyay dhowr hindise sharciyeed. Wasiirka Dastuurka C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa sanadkii hore su’aal ka keenay in Aqalka Sare uu kororsado awoodo aanu ku laheyn dastuurka, isagoo dood sharciyeed geliyay qodobka Aqalka Sare. Sanadkii hore ayay aheyd markii aqalka Sare ay meel mariyeen qodob ah inay qeyb ka noqdaan Ansixinta Miisaaniyadda dowladda oo aanay ka mid aheyn.
Askartii Itobiyanka Aheeyd ee lagu Qabtay Dagaalkii Kaxandhaale Oo Loo Duliyay Magalada Jig-Jiga
Magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad degaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa maanta la gaarsiiyay labo Askari oo shalay lagu wareejiyay waxgaradka ka socday dowlad degaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya,kuwaasoo ay ku wareejiyeen Waxgarad ka socday degmada Galinsoor. Labadda Askari ayaa waxaa galinkii dambe laga qaaday degaanka Kaxandhaale, waxaana maanta la gaarsiiyay Magaalada Jigjiga, waxaana la sheegay in halkaasi lagu maxkamadeyn doono. Qaar ka mid ah waxgaradka ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanka Itoobiyaanka ah la weydiin doona sababta keentay in lagu qabto dagaal beeleedkii degaanka Kaxandhaale. Dhinaca Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye iyo Wafdi uu hoggaaminaayay oo gaaray degmada Galinsoor ee gobolka Galgaduud ayaa loo diiday shalay in lagu wareejiyo Ciidan Itoobiyaan oo ay soo qabteen Maleeshiyo Beeleed. Mas’uuliyiintii dowladda Soomaaliya ay u dirtay degaanka Galinsoor ayaa Ku guuldareystay in ay wali xal ka gaaraan labadda dhinac, waxaana muuqata in waxgaradka labadda Beelood ay waddaan dadaallo lagu heshiisiinaayo Maleeshiyaadka dagaallamay.
Madaxweynaha Jubbaland oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan Al-Shabaab.
December 30, 2018 M.Jo 0
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa Maanta Booqday qaar kamid ah Xarumaha Ciidamada Nabadsugida Jubbaland. Madaxweynaha ayaa Askarta iyo Sarakiisha uu halkaas kula kulmay ku booriyay in ay laban laaban dadaalkooda iyo u diyaar garoowgooda howlgalada socda ee la isugu furayo Magaalooyinka xorta ah kuwa maqana dib loogu xoraynayo. Waxaa uu sheegay in dhawaan la bilaabi doono dagaal ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Deegaanada ka tirsan Jubbooyinka iyo Gedo ayaa hada waxaa ka socda howlgal ka dhan ah Al-Shabaab.
Gollaha Shacabka Oo Ansixiyay Qar Ka Mid ah Sharciyo Horyaalay Barlamaanka
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay xeer hoosaadka golaha shacabka oo dib u eegis lagu sameeyay. Xildhibaan o Gaaraya 170 xildhibaan ayaa ogolaatay, waxaa diiday 1 xildhibaan, wax ka aamusay ma jiro. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal oo kulanka shir guddoominaya ayaa sheegay in dhamaan xildhibaanada qaranka ay cod wada ogol ah ku ansixiyeen xeer hoosaadka oo dib u eegis balaaran lagu sameeyay. Hase yeeshee waxaa weli horyaal xildhibaanada Baarlamaanka ansixinta Miisaaniyada sanadka cusub ee 2019 iyadoo waqtiguna uu is gurayo muddo gaabana ay ka harsan tahay sanadka cusub.
Ciidamo Soomaali iyo Ciidanka Mareeykanka Oo Weerar Ku Qaaday Saldhiga Alshabaab ee Jubada Dhexe
Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya oo ay wehliyeen Ciidamo Mareykan ah ayaa howlgal gaar ah ka fuliyay xarun Al-Shabaab ku lahaayeen degmada Jilib ee Gobolka Jubadda Dhexe. Taliyaha qeybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Jen. Cali Maxamed Maxamuud Bogmadow ayaa sheegay in ciidamada kumaandooska ee Danab iyo kuwa Mareykanka ay qaadeen howlgal qorsheysan oo laga fuliyay Xarun tababar Al-Shabaab ku lahaayeen Jilib. Waxaa uu sheegay in howlgalka lagu dilay illaa 30 ka tirsan Shabaab oo afar ka mid ah ay ahaayeen ajaaniib, sida uu hadalka u dhigay. Ma jirto war ka madax banaan sheegashada Taliyaha qeybta 43aad Jen. Bogmadow oo xaqiijinaya howlgalka lagu dilay tirada intaas la eg oo Al-Shabaab ka tirsan. Hase ahaatee Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa muddooyinkii u dambeeyay faah faahin ka bixinayay howlagalada iyo weerarada duqeymaha ee ay ka fuliyaan Soomaaliya, kaasoo lagu bartilmaameedsado Al-Shabaab iyo Daacish.
Mamulka Puntland”Ma Soo Geli Karaan Howlwadeenada Villa Somaliya Degaanada Puntland”
December 29, 2018 M.Jo 0
Wasaaradda Amniga Puntland ayaa soo saartay amaro ku aadan sugida amniga inta lagu guda jiro doorashada, iyadoo ka mamnuucday deegaanadeeda inay soo galaan Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka. Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Amniga Puntland ayaa lagu sheegay in laga mamnuucday inta doorashada dhaceyso inay Puntland soo galaan Shaqaalaha dowladda Federaalka sida Wasiirada, Agaasimayaasha, Saraakiisha ciidanka iyo howlwadaneeda Madaxtooyada Soomaaliya. Sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay in garoomada diyaaradaha iyo baraha Koontaroolada aanay soo geli karin lacago kaash ah oo sharci darro ah, haddii ay soo gashana lala wareegi doono. Waxaa kaloo la faraha Shirkadaha Diyaaradaha imaanaya Puntland inay soo gudbiyana liiska dadka ay sidaan, inta aysan ka soo duulin garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Amarkan ayaa u muuqda mid Puntland kaga hortageyso in dowladda Federaalka goobjoog ka noqoto doorashada ka dhaceysa 8-da bishan magaalada Garowe, waxaana doorashada Puntland ku loolamaya labaatameeyo Musharax. Sidoo Kale waxa ay u muuqataa in Dowlada faderaalka loga hortagayo Dhaqaalahii Dalka In ay u Adeegsadaan BurBurinta Mamulada Dalka Kadhisan.
Maxaa Looga Hadlayaa Kulanka Baarlamaanka Soomaaliya?
December 29, 2018 F.G 0
Xildhibaanadda Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeelanaya xarunta Golaha shacabka ee Magaaladda Muqdisho. Ajendaha kulanka ayaa ah aqrinta iyo ka doodista miisaaniyadda dowladda 2019,taasoo ay soo gudbisay Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya. 26-kii bishaan Guddiga Maaliyadda Baarlamaanka Soomaaliya oo isbadal lagu sameeyay iyo Madaxda Wasaaradda waxa ay kulan ku yeesheen Muqdisho,waxayna kawada hadleen arrimaha Miisaaniyadda. Mudooyinkii ugu dambeeyay waxaa jirey khilaaf u dhaxeeyay Guddoonka Baarlamanka Soomaliya kaasi oo ka dhashay kala diristii Guddigii maaliyadda Baarlamanka. Balse dadaal ay saameeyeen Xildhibaano ka Tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa keenay in la xaliyo khilaafka guddoonka,islamarkaana la shaaciyay in dib loo bilaabo kulmadii Baarlamaanka Somaaliya. Sidoo kale Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomalaiya ayaa isbadal ku sameeyey Guddigii maaliyadda Baarlamanka,waxaana meesha laga saaray 3-xubin oo la sheegay in ahaayeen xubnihii Keenay Miisaaniyada Saxda ah Balse Xakuumada R/Wasaare Kheeyre ay Keeni Weeysay Cadeemo Waxa Lagu Soo eedeeyay Masuq-maasuq. Inkastoo uu Guddomiya Barlamaanka uusan u marin wax sharci ah uu qorayo dastuurka Dalka balse xilka uga qaaday waraaq aan laheeyn Tixraac,